कोरोना नेगेटिभ? आइसोलेट गरिदिनुस्! :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा शेरबहादुर पुन शुक्रबार, वैशाख २४, २०७८, १२:०६:००
केहि दिन यता मैले अधिक प्रयोग गर्ने वाक्यहरु मध्यमा 'कोरोना नेगेटिभ? उहाँलाई आइसोलेट गरिदिनु होला' भन्ने पनि हो। यो सुन्ने बित्तिकै धेरैलाई अचम्म र खुल्दुली लागेको पनि होला कि कोरोना पोजिटिभ भएकालाई आइसोलेट गर्नु पर्नेमा नेगेटिभ भएकालाई किन आइसोलेट गर्नु पर्यो? यस्तो सल्लाह कोरोनाको पहिलो लहरमा दिने गरेको भन्दा बिल्कुल फरक तथा विशिष्ट पनि छ। यस्तो सल्लाह दिँदै गर्दा आफूलाई पनि अलि भिन्न महसुस हुने गरेको छ।
हामीले फिबर क्लिनिक संचालनमा ल्याइसकेका छौं। यो क्लिनिकमा विशेषत कोरोना पोजिटिभ भएकाहरु आउने र आवश्यक सरसल्लाह लिने गर्दछन्। यसै क्रममा अधिकांश कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरुसँग सोध्दा परिवारमा एक दुई जान बाहेक सबै संक्रमित भएका बताउने गरेका छन्। पहिलो लहरमा पनि कोरोना भाइरस विशेष गरेर पहिलो लकडाउन पछिको निषेधाज्ञ हुँदा परिवार भित्र प्रवेश गरेको थियो।
तर हाल दोश्रो लहरमा देखेको भन्दा फरक त्योबेला अधिकांश परिवारका सदस्यहरुलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग गरी पिसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस पुष्टि हुने गरेको थिएन। त्यो बेला परिवारका संक्रमित नभएका सदस्यहरुले सक्रमितलाई आत्मबल दिने, खानपानमा सहयोग गर्ने र आवश्यक परे अस्पतालसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने गर्दथे।तर दोश्रो लहरको शुरुवातमा नै कोरोना भाइरस परिवार भित्र प्रवेश गरिसक्दासम्म पनि हामीले चालै पाउन सकेनौ‌। र चाल पाउदासम्म लगभग परिवारका अधिकांश सदस्यहरु संक्रमित भैसकेका देखिन्छन्।
परिवारमा एक जना मात्र कोरोना नेगेटिभ भएका धेरै परिवार देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना नेगेटिभ सदस्यलाई आइसोलेट गर्न अर्थात् परिवारका संक्रमित सदस्यहरुबाट अलग भएर बस्न सल्लाह दिनुको विकल्प हुँदैन। यदि कोरोना नेगेटिभ सदस्य परिवारमा कम उमेरका हुनुहुन्छ भने बाकी सदस्यहरु (संक्रमित भएकाहरु) सो सदस्यको दैनिकीमा देखिन सक्ने कठिनाइलाई लिएर चिन्ता लिएको देखिन्छन्। हाल फिबर क्लिनिकमा आउनेहरु धेरैमा यस्तो चिन्ता देखिन्छ।
नेपालमा कोरोनाको दोश्रो लहरले पाइला बढाई सकेको छ र यो हाम्रो अनुमानभन्दा अत्यधिक तिब्र गतिमा फैलादो छ।यो पहिलो लहर भन्दा आक्रामक पनि देखिन्छ। धेरैले यो अहिलेको अवस्था कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले गरेको अनुमान गरेको पाहिन्छ तर कुन भेरिएन्टको कोरोना भाइरसले ड्राइभ गरिरहेको छ भन्ने राम्रो प्रमाण/आधार देखिदैन। यो प्रष्ट भए त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव/क्षतीको बारेमा अनुमान गरी त्यसै अनुरुप योजना/ रणनीति बनाउन सहयोगी हुनेछ। अर्थात् उपचार केन्द्र, जनशक्ति तथा आवश्यक मेडिकल सरसामान /औषधीको अनुमानित व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
हाल कोरोना भाइरस धेरैको परिवार भित्र प्रवेश गरिसकेकोले आगामी दिनमा यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव पर्खनु बाहेको अर्को विकल्प देखिंदैन।
कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमित सदस्यको बारेमा परिवारका बाँकी सदस्यहरुले धेरै चिन्ता गर्दथे तर दोश्रो लहरमा भने त्यसको ठिक उल्टो परिवारमा धेरै जना संक्रमित हुँदा परिवारमा एकल भएका कोरोना नेगेटिभ सदस्यले (विशेषत सानो उमेरको भए) दैनिकी चलाउदा बेहोर्ने पर्ने कठिनाईलाई लिएर चिन्तित भएको देखिन्छ। यो पहिलो लहरमा देखिएको अवस्थाहरु मध्ये फरक दृश्य मान्न सकिन्छ। वास्तवमा, यो दृश्यले कोरोना भाइरस दोश्रो लहरमा फर्कँदा बढी शक्तिशाली/संक्रामक/आक्रामक भएर आहेको भन्ने प्रमाण पनि दिन्छ। तसर्थ कोरोना भाइरसले देखाउने अप्रत्याशित हर्कतलाई निरन्तर पछ्याउनु पर्ने हुन्छ जसको लागि राज्यले अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।